Indy Ashi Chiang Dao - I-Airbnb
Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguKanyaporn (Oil)
UKanyaporn (Oil) yi-Superhost
IAshi Guesthouse ikwiChian Dao, yimizuzu esi-7 yokuhamba ukuya eChiang Dao emqolombeni kwaye kufutshane nemithombo yendalo eshushu. I-Contemporary Thai Lanna kunye nendlu yesitayile saseJapan. Ifaneleke kakhulu izibini ezifuna ukukhululeka ngokukhululeka phakathi kwendalo. Umbono omangalisayo kwibalcony ukubona iMount Chiang Dao intaba yesithathu ephakamileyo eThailand. Iimasaji zinokulungelelaniswa ngexesha lokuhlala kwakho. Hlala nathi njengosapho lwethu.
Vuka qho kusasa uye kumbono omangalisayo weDoi Luang Chiangdao, ngokwejografi, sikumgama oziikhilomitha ezi-5 kuphela ukusuka entabeni ngokwayo. Oku kusondele kangangoko xa uxabisa intaba kunye nencopho yayo.
Yakhelwe ngumphandi waseJapan owafika eChiangdao kuphando lwakhe kwi-Entomology kwiminyaka engama-20 eyadlulayo, le ndlu yezitena kunye nemithi yeteki yakhiwa ngendlela yemveli yaseThai kunye nezinto zenkcubeko yaseJapan kuyo. Umntu uyakwazi ukuxabisa ingqokelela yakhe kwi-Entomology kunye neziqwenga zobugcisa aziqokelele kule minyaka idlulileyo. Ngokwazisa le mvelaphi yembali, sijonge ukunika indawo epholileyo nefudumeleyo kuzo zonke iindwendwe zethu ngelixa sibavumela ukuba babe namava okuphila njengendawo yasekhaya.
Umbuki zindwendwe ngu- Kanyaporn (Oil)
Silawulwa lusapho lwasekuhlaleni, sijonge ukubonelela ngobubele basekuhlaleni obungcono. Zive ukhululekile ukubuza naluphi na ulwazi malunga nezinto ezinomtsalane ezikufutshane okanye iingcebiso malunga nokujikeleza indawo.